CDF LE CNA LEI NIH BIAFIANG THANHNAK AN TUAH CANG – The Chinlung Post
CDF LE CNA LEI NIH BIAFIANG THANHNAK AN TUAH CANG
CDF le CNA nih Lungler Sakhaan an Lak, Ralhrang 12 an Thi. CDF-Thantlang le CNA ralkap i bawm in September 10 zinglei ah Lungler SAC ralhrang sakhaan an doh i September 11 zaan ah an lak khawh. Sakhaan lak kahdohnak ah SAC ralhrang 12 an thi i, CNA/CDF-Thantlang lei in minung 8 an i hliam. Sakhaan chung i ralhraim pawl an lak dih hnu ah mei in kan khanghpiak hna,” tiah nihin zaanlei ah CDF nih thawngthanhnak an tuah.
ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လုံလဲရ် စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို CDF/CNA သိမ်းပိုက်, ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လုံလဲရ်ကျေးရွာ တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ နောက်မဆုတ်တမ်း တပ်စခန်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်‌ ညက CDF မှ အောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ၅နာရီခန့်မှစ၍ အဆိုပါစခန်းကို CDF/CNA မှ ၀င်တိုက်ခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ် အထိနာပြီး တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် စစ်ကောင်စီမှ ပြင်းထန်းစွာဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် CDF/CNA ရဲဘော်တစ်ချို့ဒဏ်ရာရရှိကြပြီး လုံလဲရ်ဘုရားကျောင်းထိခိုက်ပျက်ဆီးသည့်အပြင် ရွာသား ၁၅၀ ဦးကျော် မီဇိုရမ်ဖက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ CDF ထုန်ပြန်ချက်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်သာ ၁၂ဦးသေဆုံးပြီး လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးပြီနောက် စခန်းကိုမီးရှိုဖျတ်ဆီးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လုံလဲရ် စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် CDF ရဲဘော် ၈ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြသည်။ The Chin Journal
RIP. RALHRANG NIH FAKTUK IN AN HREM HNU AH AN KAHTHAH
DELHI LEI AH RAT AA TIMMI NIH RALRIN DEUH A HERH MEN LAI